I-Recipe yeDessert "iTiramisu"
Indlu yasekhaya Recipes Okunye Izithako Imveliso yobisi Mascarpone
I-dessert yase-Italiya - i-classic tiramisu Ekuqaleni, le dessert yase-Italiya yayibizwa ngokuba isobho se-ducal, ekubeni okokuqala kwakuphekwe yi-confectioners abadumileyo kwisixeko saseSiena ekupheleni kwekhulu leshumi elinesixhenxe ehloniphekileyo kwi-Grand Duke waseMedici. Umbutho wawuthandeka kakhulu, ngoko ke ama-confectioners azame aze amlungiselele kwi-recipe ekhethekileyo isidlo esitsha esingavamile. Kamva eli phepheni lawela eFlorence naseVenice, apho lalinalo igama langempela kwaye lalidume kakhulu phakathi kwabathengisi. Inyaniso kukuba babecinga ukuba lo mnandi uvuselela, kuba iqulethele kunye nekhofi, ngoko bahlala besidla ngethuba lokuhlangana kwintando. Kwaye negama le dessert ekuguquleleni ulwimi lwesiTaliyali luthala ngathi "ndiphakamise". Kuze kube ngoku, i-tiramisu ihlala enye yezona zidumi ezidumileyo zaseNtaliyane. Kwiresiphi ye-tiramisu yeklasi ibandakanya i-mascarpone ishizi kunye ne-porous, air savoyardi cookies. Nangona kunjalo, iintlobo ezininzi zezikhetho ze-tiramisu zabonakala ezininzi. Phakathi kwazo kukho iirephepheni kunye nokudibaniswa kotywala, iintlobo ezahlukeneyo zeziqhamo kunye neziqhamo. I-Tiramisu inokulungiswa kwiindawo ezihlukeneyo okanye ngendlela yekhekhe elikhulu. I-mascarpone kunye ne-savoyardi, ukuba ifunwa, inokuthi ithathe indawo yesohlwayo esinamaqatha ama-cottage cheese kunye nama-biscuits e-biscuit.
I-cheese Mascarpone 400g
Amaqanda inkukhu 5 amaqhosha.
I-powar powder 0.5 tbsp.
Cognac 2 tbsp. l.
I-espresso ikhofi 250 ml
I-cookies Savoyardi 250 g
I-cocoa powder 6 tsp.
I-chocolate emnyama 50 g
Inyathelo 1 Ukulungiselela i-tiramisu, iibiscuits ze-Savoyardi, amaqanda, i-cream yamaspipone, ushukela ophucukileyo, ikhofu eqinile iya kufuneka.
Inyathelo 2 Ukwahlula iiprotheyini eziphuma kwizikhuni kwaye ufake iiprotheni kwiqrijini (zibhetele kune-whisk ebandayo).
Inyathelo lesi-3 Sidibanisa izikhupha kunye noshukela wesikhupha, whisk de kube umthamo ukwanda ngamaxesha ama-2.
Isinyathelo 4 Yongeza i-mascarpone ushizi udibanise kakuhle.
Inyathelo lesi-5 Hlanganisa iiprotheni kwi-foam eninzi.
Inyathelo 6 Hlanganisa ngononophelo amaprotheni kumxube we-cheese uze udibanise.
Inyathelo 7 Yongeza i-cognac kwikhofi. Sifakela isahluko ngasinye se-Savoyardi kwikhofi kunye ne-cognac (i-cookie ifanele ifumaneke kakuhle) kwaye ibeke ucala lokuqala lwe-tiramisu. Endaweni yama-biscuits, ungathabatha i-biscuit cut into strips.
Isinyathelo 8 Phezulu kwecookie isasaza ugcino lwekhemisi okungenani ii-2 cm.
Inyathelo lesi-9 Siphinde sisasaze i-dessert yesibini kwidiskiti ekhethiweyo kwaye siyifake ikhefu.
Inyathelo 10 Beka iTiramisu efrijini ngeeyure ezingama-3 okanye ubusuku bonke.
Inyathelo 11 Ngaphambi kokuba usebenze i-tiramisu, fafaza i-cocoa powder kwaye ungathululelwa nge-tshocolate.
I-Eclairs enekhilimu e-creamy
Ice cream "iTiramisu"
I-Italiya ihamba ngeeshizi kunye neetamatati
I-polenta enobuhlungu kunye namakhowe
I-sausage ngamakhowe kunye ne-tortellini
Indlela yokwahlula indlu kunye nomntu ode naye?
Ukuthatha inxaxheba kwimicimbi yequmrhu
Belyashi kunye nenyama
Yenza ntoni ukwakheka kokwenza
Ii-Oranges zesikhumba sombuso
Isaladi kwi-anyanisi eluhlaza kunye neetamatato
Utywala lokususa i-varnish-isidingo sokuba ngumntu ococekileyo
Amanqaku angama-10 aphezulu eenkwenkwezi ngo-2017: obani abadumileyo baseRussia bahamba ngorhageki
Ikhasi leThalayibhile - ukuzingca wonke umntu
Kutheni amadoda atshintsha indlela yokubuyisela umyeni?
Imithetho eyi-10 yobomi obunempilo
I-albhamu yezithombe ngezandla
U-Yana Rudkovskaya wazama ukuhlazisa u-Ilya Averbukh, kodwa wazihlazisa
Indlela yokulungisa isepha ngezandla zakho
Ukuba ukuxilongwa kwe "candidiasis" ubeka ngexesha lokukhulelwa